Just Definitions! | ZAYYA
← တစ်ဖက်တည်း တီးတဲ့ လက်ခုပ်သံ
ခဏ တံခါး →
ဘာဝနာအမှု ဟာ ဘဝကို ရှောင်းပြေး နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘဝရဲ့ လက်ရှိ တည့်တည့် အပေါ် ခိုဝင် လက်ခံလိုက်ခြင်း သက်သက် ပါ။ တကယ်တမ်း ဘဝကို ရှောင်ပြေး နေတာတွေ က ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ကူး၊ အတွေး၊ စွဲလမ်းသမျှ မျှော်လင့်ချက်၊ အနာဂတ် အိပ်မက် – စတာ တွေချည်း သက်သက်ပဲ။ ဆိုလိုတာက လိုအင်ဆန္ဒ တွေ သာလျင် ဘဝက ရှောင်ပြေး နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Meditation is Alertness.
ခင်ဗျား ဘယ်အရာကို လုပ်လုပ်၊ သိမြင်မှု သက်သက်နဲ့ လုပ်နိုင်လာတဲ့ အခါ အသေးအဖွဲလေးက အစ လေးနက် နေပါတယ်။ လမ်းလျောက်တာ၊ စကားပြောတာ၊ စားသောက်တာ၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေတာ – စသဖြင့် အားလုံး တည်ငြိမ် လေးနက် နေပါတယ်။ တနည်းပြောရင် – မြင့်မြတ်မှု ရှိတယ်။
ဒီနေရာမှာ – ခင်ဗျား ဘာကို လုပ်နေတာလဲ – ဆိုတာ အရေးမပါဘူး။ ခင်ဗျား ဘယ်လို လုပ်နေသလဲ ဆိုတာပဲ အရေးကြီးနေ ပါတယ်။ ခင်ဗျား ဒီစာ ဖတ်နေသလား။ တစ်လုံး ပြီး တစ်လုံးပေါ် ခင်ဗျား မျက်လုံးတွေ ဖြတ်ပြေးသွားမယ်။ စိတ်အတွေး တွေ ပုံဖော် စဉ်းစားနေမယ်။ – အဲ့ဒါကို ခင်ဗျား သိနေမယ်။ ဆက်ပြီး ဆက်ပြီး ဖတ်နေရင်း – ဆက်ပြီး ဆက်ပြီး အတွေးတွေ ရှိနေမယ်။ ခင်ဗျား သတိ ရှိနေမယ်။ – ဒါဆို ခင်ဗျားရဲ့ အခု ခဏ နေထိုင်မှုလေးက တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။ ဒီစာကို သာမက ခင်ဗျား ဘဝရဲ့ အခု ခဏ အပေါ်မှာပါ ခင်ဗျား သိမြင်နေလို့ပဲ။
ဒီစာကို ဖတ်နေသလို ခင်ဗျား ပြောင်းလဲ သွားမယ့် အခြား အရာတွေ တိုင်းအပေါ်ကိုလည်း ခင်ဗျား သိမှတ်မှု ရှိနေမယ် ဆိုပါတော့။ ဒါဆို ခင်ဗျား သန္တာန်မှာ သိမြင်မှု သက်သက်နဲ့ လက်ရှိ ဘဝကို နေထိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျား သန္တာန်မှာ စောင့်ကြည့်နေမှုသာ ရှိတော့တယ်။ ခင်ဗျား လက်ရှိ ကို နိုးနိုးကြားကြား သတိရှိနေတယ်။ မရှိတော့တဲ့ အတိတ်၊ မရောက်လာသေးတဲ့ အနာဂတ်ထဲ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက် ရှိမနေဘူး။ သူတို့ ဝင်ရောက်လာရင်လည်း ခင်ဗျား လက်ရှိ အဖြစ်ကို သိမှတ်နေမှုဟာ – သူတို့ကို အတွေးအဖြစ်မှာပဲ ထားရှိသွားပါတယ်။ ခင်ဗျား သန္တာန်မှာ အတွေးအနေနဲ့ ဖြတ်သန်း သွားမယ်။ ခင်ဗျား လက်ရှိ အခုခဏကို သိနေတယ်။ ကြံစည်စိတ်ကူးမှုကို အခုလက်ရှိ သိမြင်မှုနဲ့ လက်ခံ သိမ်းပိုက်တယ်။
အဲ့အတွက် ခင်ဗျားဟာ ဘဝ စစ်စစ် အတွင်း နိုးကြားမှု သက်သက်နဲ့သာ နေထိုင်သွားတော့တယ်။ ခင်ဗျား သန္တာန်မှာ ကြည်လင်တဲ့ သိမြင်မှု သက်သက် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
စိတ်ကူး အတွေး အားလုံး ဟာ ဝေါဟာရ ၊ စကားလုံး တွေ ချည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစု ရဲ့ အသိမှာ – အဲ့ဒီ စိတ်ကူး အတွေးအကြံ၊ အတွေးအခေါ် တွေသာ အရှင်သခင် ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူသားတွေ ဖန်တီးတဲ့ ဝေါဟာရတွေဟာ အဲ့ဒီ အတွေးအကြံ ဘောင် အတွင်းမှာပဲ တည်ရှိ နေရတယ်။ ခင်ဗျား စိတ်ကူး၊ တွေးခေါ်နိုင် ရင် – အဲ့ဒီ တွေးခေါ်သမျှ ခင်ဗျား ပြောပြ နိုင်ပါတယ်။ သင်္ကေတ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ ဖော်ပြနိုင်နေတယ်။
ဒါဆို အဲ့အတွေးအကြံတွေ ပယ်ပျောက် သွားတဲ့ အခါ၊ ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ အခါ ဘာဖြစ်မလဲ။ သူတို့ကို ကျော် လွန် ဖောက်ထွက် သွားတဲ့ အခါ – အတွေးတွေရဲ့ နောက်မှာ – ဘာသာစကားတွေ မဲ့ကုန်ပါတယ်။ ဝေါဟာရတွေ ပျက်သုဉ်း သွားတယ်။ ဆိုလိုတာက – အားလုံး ပျက်သုဉ်းနေတဲ့ တိတ်ဆိတ်မှု မျိုး ဖြစ် သွား တယ်။ ( ဒီစကားကလည်း အတိအကျမမှန်ပါဘူး ၊ တိတ်ဆိတ်မှု ပါ ရှိမနေတဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုမျိုး )
တကယ်တမ်း အဲ့ဒီ အဖြစ်ဟာ ကျနော်တို့ ခင်ဗျား တို့ သန္တာန်မှာ အမြဲ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ ပြန်ငုံ့ မကြည့် ခဲ့ဘူး။ ပြန်မမြင်နိုင်ခဲ့ ဘူးရယ်။ ဘာလို့ဆို လူ့အဖွဲ့အစည်းက ၊ အရေးအရာ ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်က၊ ခင်ဗျား ရဲ့ အစွဲအလမ်းတွေက၊ နောက်ဆုံး ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်က – ခင်ဗျား အဲ့လို တိတ်ဆိတ် သွားတာမျိုး ကို အဖြစ်မခံဘူး။ အမြဲတမ်း စကားလုံးတွေ ဖြည့်ထည့်တယ်။ စကားလုံးတွေ၊ ဝေါဟာရတွေ တွဲစပ် ဖွဲ့စည်းတယ်။ ကြီးမြတ်တဲ့ အတွေး အခေါ် ကြီးတွေ တည်ဆောက်တယ်။ အဆုံးသတ်မှာ အတွေးအခေါ် မရှိရင် လူ မဟုတ်ဘူး လို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ထင်မြင် လာစေတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ ခင်ဗျား ကိုးကွယ် လိုက်တဲ့ တစ်ခု တည်းသော အရာဟာ ခင်ဗျားရဲ့ “စိတ်” ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဘာဝနာ ကတော့ အဲ့လို မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားကို ဘယ်ကိုးကွယ်မှုမှ မပေးဘူး။ အခု ခင်ဗျား ကိုးကွယ်နေတဲ့ “ခင်ဗျား စိတ်ကူး၊ အတွေး၊ စကားလုံး” တွေကို သတ်ပစ် တယ်။ ခင်ဗျား ရဲ့ အရင်းအကျဆုံး နေရာကို ရှင်းလင်း ထုတ်ပေးတယ်။ တကယ် စင်စစ် ခင်ဗျားဟာ ဘာလဲ လို့ လမ်းပြပေးတာ သက်သက်ကို ဘာဝနာလို့ ကျနော် ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဘာဝနာနဲ့ နေထိုင်လာတဲ့ အခါ ခင်ဗျား အတွက် စကားလုံး မဲ့လာပါတယ်။ ခင်ဗျား အတွက် – ခင်ဗျား နေထိုင်မှု သက်သက်မှာ စကားလုံး ဝေါဟာရ ဘောင်တွေက ကင်းလွတ် သွားတယ်။ တိတ်ဆိတ် နေတဲ့ သန္တာန် သာ ကျန်နေရစ် တယ်။ ဒါဟာ ဖန်တီး လုပ်ယူတဲ့ အခြေအနေ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျား ရဲ့ မူရင်း သဘာဝ ကို ပြန်ရှာတွေ့ရှိတာ မျိုး သက်သက်ပါ။
The man who desires is an escapist. Now, this is very strange that meditators are thought to be escapists. That is utter nonsense. Only the meditator is not an escapist – everybody else is. Meditation means relaxing in the moment, in the present. Meditation is the only thing in the world which is not escapist, although it is thought to be the most escapist thing. People who condemn meditation always condemn it with the argument that it is escape, escaping from life. They are simply talking nonsense; they don’t understand what they are saying.
Whatsoever you do, do it with deep alertness; then even small things become sacred. Then cooking or cleaning become sacred; they become worship. It is notaquestion of what you are doing, the question is how you are doing it.
Mind is nothing but all the words that you have accumulated; silence is that which has always been with you